Qof kale oo loo xiray dacwad dil ah oo ku saabsan dilka wiil 18 jir ah la toorriyeeyay dalka UK . | Dayniile.com
Home Warkii Qof kale oo loo xiray dacwad dil ah oo ku saabsan dilka...
Qof kale oo loo xiray dacwad dil ah oo ku saabsan dilka wiil 18 jir ah la toorriyeeyay dalka UK .
Qof kale oo ah ruuxii lixaad ayaa lagu soo oogay dacwad dil ah oo ku saabsan dilka wiil 18 jir ah la toorriyeeyay.
Cabdiraxiim Maxamed ayaa ku dhintay isbitaal ka dib markii laga helay dhaawacyo badan oo toorri ah. Wiilkan da’da yar ayaa laga soo qaaday waddada Melbourne, ee magaalada Leicester, 8-dii bishan September.
Zakir Brant, oo 25 jir ah, ayaa dacwad lagu soo oogay kaddib markii booliska ay xabsiga u taxabeen Jimcihii, iyagooo la xiriirinaya dilka Cabdiraxiim, wuxuuna ka soo muuqan doonaa maxkamadda Magaalada Leicester maalinta Isniinta ah.
Sidoo kale maalinkii Sabtida, booliska waxay soo qabteen nin lixaad oo isaguna looga shakisan yahay dilka.
Siddeed qof ayaa horay dacwad loogu soo oogay sababta la xiriirta geerida wiilkan kasoo jeeda Soomaaliya.
Dadka dacwadaha wajahaya ayaa kala ah:
– Mohammed Israfeel Gul, oo da’diisu tahay 27-sano jir, isla markaana ku nool New Way Road
– Daniel Pollard ooo isna da’diisu tahay, 29-sano jir, waxaa uuna kasoo jeeda xaafada Calder Road
– Mohammed Hansrod oo isna da’diisu lagu sheegay inay tahay, 29-sano jir, waxaa uuna deggan yahay Dulverton Road
– Abdul Hemid Suleman isna da’diisu tahay, 58-sano jir, waxaa uuna kasoo jeeda deegaanka Jupiter Close
– Bhavic Parmar oo da’diisu tahay 25-sano jir, waxaa uuna isna ku nool yahay xaafadda Bowling Green Street.
Raggan dhammaantood ayaa waxaa loo maxkamadeyn doonaa dilka Cabdiraxiim Maxamed.
Magaalada Leicester waxay ka mid tahay qaybaha ay Soomaalidu ka deggan yihiin dalka UK. Qaar badan oo bulshada Soomaalida ah ayaa halkaasi gaaray si nolol fiican ay uga helaan, kaddib dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya.
Balse dhallinyarada Soomaalida ah ee halkaasi ku dhaqan qaarkood ayaa waxa ay la kulmeen mowjado weerarro ah oo loo adeegsado mindiyo, taasi oo saamaysay guud ahaan Soomalida ku nool UK.
Hadda waxaa socda dadaal ay wadaan odayaasha Soomaalida oo is abaabulay isla markaana habeenkii u baxa iney ku gaaf wareegaan waddooyinka si ay u xaqiijiyaan amniga da’ yarta.
Waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo London iyo magaalooyin kale ee qurbaha ku yaalla ku nool ayay uur ku taallo ku tahay dhibaatada mindiyaha iyo dilalka loo geysto dhalinyarada, arrinkaasi oo haatan dalka UK min baarlamaan ilaa guri caadi ah laga hadal hayo.
Boqollaal ka mid ah dhallinyarada ku nool Britain ayay waaliddiintoodu u soo diraan Bariga Afrika, iyagoo lagala soo cararayo dembiyada midiyaha ee UK ku badan, sida ay sheegeen qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee dalkaas ku nool.
Rabshadaha ay ku lug leeyihiin dhalinyarada Soomaalida waa mid adag oo wajiyo kala duwan leh, booliskana waxay sheegayaan inaysan jirin wax loo sababayn karo dhibaatooyinkan oo uusan jirin wax xal ah.
Previous articleMadaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasanjo iyo wafdi ballaran oo ku soo wajahan magaallada Muqdisho
Next articleGudoomiyaha Gobolka Gedooo xilka ka qaaday Gudoomiyihii Degmada Doolow
Dowladda Qatar ayaa cambaareysay weerarkii is-miidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay Isgoyska Ceel-Gaabta ee Magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen siddeed qof, halka...
Soomaaliya iyo Thailand oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal